နှုတ်ခမ်းလေးများကို L'Oréal Paris X Balmain Color Riche Lipstick နဲ့ အလန်းခြယ်ကြမယ်!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » နှုတ်ခမ်းလေးများကို L’Oréal Paris X Balmain Color Riche Lipstick နဲ့ အလန်းခြယ်ကြမယ်!!!
နှုတ်ခမ်းလေးများကို L’Oréal Paris X Balmain Color Riche Lipstick နဲ့ အလန်းခြယ်ကြမယ်!!!
ချစ်ရတဲ့ Cosmetic Myanmar ပရိသတ်ပျိုမေတို့အတွက် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် အမိုက်စား နှုတ်ခမ်းနီလေးများနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပျိုမေတို့အားလုံး လက်ခံသဘောကျပြီးသား အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ L’Oréal Paris အမှတ်တံဆိပ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး Balmain Fashion House နဲ့အတူ ပူးပေါင်းဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် L’Oréal Paris X Balmain Color Riche Lipstick Collection လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီ Collection ထဲမှာ အစိမ်းရောင် (Glamazone)၊ အပြာရင့်ရောင် (Rock) နဲ့ အနက်ရောင် (Couture) ဆိုပြီး အရောင် (၃)မျိုးနဲ့ Set ခွဲထားပါတယ်။ Set တစ်မျိုးစီမှာ နှုတ်ခမ်းနီ (၄)မျိုးပါဝင်တာကြောင့် စုစုပေါင်း နှုတ်ခမ်းနီဘူး ၁၂ဘူး ပါဝင်ပါတယ်။ Set တစ်ခုချင်းအလိုက် ပါဝင်တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့-
၁။ အစိမ်းရောင် (Glamazone)
#469 Fever (Red Orange)
#647 Urban Safari (Beige)
#905 Balmain Instinct (Green)
၂။ အပြာရင့်ရောင် (Rock)
#902 Legend (Dark Brown)
#467 Freedom (Purple Matte)
#650 Power (Red Brown)
#901 Rebellion (Blue)
၃။ အနက်ရောင် (Couture)
#468 Liberation (Dark Purple)
#246 Confession (Peach)
#356 Confidence (Rose Gold Metallic)
#355 Domination (Red Matte)
တစ်ရောင်ချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ရင် ဥရောပဆန်ဆန်အရောင်တွေ ထူးခြားစွာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းသားလေးများထက်မှာ ဆိုးလိုက်ရင် လူပုံအလယ်ထင်သာမြင်သာတဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာပါ။ Limited Edition ဖြစ်တာကြောင့် အကန့်အသတ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဝယ်ယူလို့မရနိုင်သေးပေမဲ့ L’Oréal Paris Myanmar ရဲ့ Facebook Page ကနေ Pre-order လက်ခံနေပြီဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးကတော့ 154,800Ks ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးခင် အချိန်ကာလမှာလည်း Cosmetic အရောင်းကောင်တာများမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Collection တစ်ခုလုံး မဝယ်ချင်တဲ့ပျိုမေများအတွက်လည်း တစ်ချောင်းချင်းစီ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချောင်းချင်းတန်ဖိုးကတော့ တစ်သောင်းသုံးထောင်ဝန်းကျင်ခန့် ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source – www.loreal-paris
ရွှီးခနဲ ရွှီးခနဲ ဖြန်းလို့ရနိုင်မယ့် Setting spray နဲ့ Facial Spray များအကြောင်း